Qubanaha » Barlamaanka Soomaaliya oo wada Mooshin ka dhan ah Saldhigga Imaaraatka ee Berbera
Barlamaanka Soomaaliya oo wada Mooshin ka dhan ah Saldhigga Imaaraatka ee Berbera
Mar 6, 2017 - jawaab
Qubanaha.net-Muqdisho-Golayaasha Guurtida iyo Wakiilada Somaliland ayaa bishii la soo dhaafay ansixiyay heshiis ay kala saxiixdeen Maamulka Somaliland iyo Imaaraadka carabta, kaasoo dhigaya in Imaaraadka Saldhig ka sameysto garoonka diyaaradaha Berbera.
Qaar ka mid ah Xildhibaanada Baarlamaanka Federaalka ayaa sheegay in heer gabo gabo ah uu u marayo diyaarinta mooshinkan, ayna maalmaha soo socda hor-geyn doonaan Guddoonka Baarlamaanka.
Xildhibaanada ayaa sheegay in Saldhiga Imaaraadka Carabta ka dhisanayo Berbera ay tahay arrin dhaawaceysa jiritaanka Midnimada Soomaaliya, isla markaana ah xadgudub.
Kulankii Baarlamaanka ee Sabtidii ayaa Xildhibaano qaar soo hadal qaadeen arrinta saldhiga Imaaraadka Carabta, hase ahaatee Guddoomiye Jawaari ayaa diiday in laga hadlo, iyadoo aanay ku jirin ajandaha, waxaa uu xusay in loo baahan yahay in hadii la rabo in laga hadlo ama laga doodo mooshin laga keeno.
Xiisada diblomaasiyadeed ee u dhaxeysa dowladda Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta ayaa cirka isku sii shareereysa, kaddib markii Imaaraadka Carabta u yeertay Safiirkii u joogay Somalia, sababo ku aadan muranka iyo cabashada dowladda Somalia ka keentay saldhiga Milateri.
Imaaraadka Carabta ayaa dhowrkii sano ee u dambeeyay si weyn ugu lug laheyd arrimaha Soomaaliya, iyadoo xiriiro dhow la laheyd maamulada dalka, kuwaasoo qaarkood ugu deeqday saanad milateri, iyo gaadiid isugu jira mid ciidan iyo kuwa madaxda lagu qaado ee aan xabadaha karin.